अाजबाट खुल्दैछ डिभी २०१९ को चिठ्ठा, दुतावास भन्छ ' छिटोभन्दा छिटो भरेकै बेस !' - Chandragiri News
Home समाज अाजबाट खुल्दैछ डिभी २०१९ को चिठ्ठा, दुतावास भन्छ ‘ छिटोभन्दा छिटो भरेकै...
अाजबाट खुल्दैछ डिभी २०१९ को चिठ्ठा, दुतावास भन्छ ‘ छिटोभन्दा छिटो भरेकै बेस !’
२०७४, १७ आश्विन मंगलवार १५:०३
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले सन् २०१९ डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी) कार्यक्रमको लागि आवेदन दर्ता को लागि नेपाली समय अनुसार मंगलबार बेलुका पौने दश बजेबाट आवेदन गर्न पाईने भएको छ । सन् २०१९ को डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी) कार्यक्रमको लागि आवेदन दर्ता अवधि अक्टोबर ३, २०१७ (२०७४ असोज १७) मा न्यूयोर्कको समय अर्थात इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमको मध्याह्न (नेपालमा स्थानीय समयअनुसार रातको ९:४५ बजे) बाट सुरु हुने गरी खुल्नेछ । यसरी आवेदन दिने मिति नोभेम्बर ७, २०१७ अर्थात नेपाली पात्रो अनुसार (२०७४ कार्तिक २१) मा इस्टर्न स्ट्यान्डर्ड टाइमको मध्याह्न (नेपालमा स्थानीय समयअनुसार रातको १०:४५ बजे) बन्द हुनेछ । अमेरिकी दूतावास काठमाण्डौंले डि.भी. आवेदकहरूलाई चाँडै नै आवेदन भर्न प्रोत्साहित गर्दछौँ भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।
काठमाण्डौंस्थित अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
कन्सल्टेन्टको आवश्यकता नपर्ने : अमेरिकी दूतावास तपाईँहरूलाई आवेदन भर्दा कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन सल्लाह दिन्छ । आवेदनसम्बन्धी सहयोग चाहिएमा परिवारको सदस्य, साथी वा अन्य विश्‍वासिलो व्यक्तिको सहयोग लिनेतर्फ विचार गर्नुहोला । सहयोग जसले उपलब्ध गराए तापनि आफ्नो आवेदनका लागि तपाँई स्वयम् जिम्मेवार रहनुहुनेछ ।
फारम अनलाइन भर्नुपर्ने : सन् २०१९ को डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठाका लागि आवेदकहरूले दर्ता अवधिमा यो लिंक मा गई इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ई-डि.भी.) आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ ।
पारिवारिक विवरण खुलाउनुपर्ने : दर्ता गर्दा तपाईँले आफ्ना पति/पत्‍नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचिकृत गर्नु अनिवार्य छ । उनीहरूलाई समावेश नगरी पेश गरिएको आवेदन अमान्य ठहरिनेछ ।
एक जनाका लागि एउटा आवेदन : तपाईँले एउटा मात्र आवेदन बुझाउनु पर्नेछ । एकभन्दा बढी आवेदन बुझाउने आवेदकहरू चिट्ठाका लागि अयोग्य ठहरिनेछन् ।
हालसालै खिचिएको फोटो : अघिल्लो वर्षको डि.भी. आवेदनमा प्रयोग गरिएको फोटो यस वर्षको आवेदनमा प्रयोग गरेमा अयोग्य ठहरिनेछ । फोटोसम्बन्धी नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक फोटो आफ्नो आवेदनमा समावेश भएका सही व्यक्तिहरूसँग मेल खाने गरी पेश गर्नु पर्नेछ । फोटो खिच्दा आवेदकहरूले चश्मा लगाउनु हुँदैन ।
आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बरलाई अवश्य सेभ र प्रिन्ट गर्नुहोस् : यो नम्बर नै तपाईँको स्टेटस चेक गर्ने एक मात्र तरिका हो ।
आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर कसैलाई पनि नदिनुहोस् ।
तपाँईँ डि.भी. का लागि छनोटमा पर्नुभयो कि भएन भनी निर्धारण गर्ने एउटा मात्र विधि भनेको मे १,२०१८ (२०७५ वैशाख १८) वा त्यसपछि यो लिंकमा गई आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर प्रवेश गर्नु हो ।
तपाईँ डि.भी. विजेताका रूपमा छानिँदैमा तपाईँले भिसा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रत्याभूत गर्दैन । तपाईँले भिसाका लागि अन्तर्वार्ता दिने मौका पाउनुभयो भने कन्सुलर अफिसरले तपाईँसँग आवश्यक योग्यता छ वा छैन र अमेरिकी आप्रवासी कानुनबमोजिम डि.भी. का लागि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुराको निर्क्‍यौल गर्नेछन् । अन्तर्वार्ताका लागि जाँदा आफूसँग लैजानुपर्ने दस्तावेजहरूको सूची यहाँ दिइएको छ ।
Previous articleनेपाली उदयमान किक बक्सर अविरल फेरी ब्राजिलियन खेलाडी संग भिड्दै
Next article३ दलबीच ‘एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी’ गठन गर्न ६ बुँदे सहमति